Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo sheegay in dowladda ay soo food-saartay dhaqaale xumadii ugu darnayd. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo sheegay in dowladda ay soo...
Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo sheegay in dowladda ay soo food-saartay dhaqaale xumadii ugu darnayd.
Wasiirka Maaliyadda xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in markii u horraysay dowladda ay soo food-saartay dhaqaale xumadii ugu darnayd, kadib markii deeq-bixiyaashu ay ka jarteen dhaqaalihii ay siin jireen dowladda Federaalka.
Wasiir Beyle, ayaa sheegay mushaharka Shaqaalaha iyo Ciidamada dowladda, oo ay ku jiraan cuntada iyo adeegga Ciidanka ay ku baxdo lacag dhan $30 malyan oo Dollar, taas oo aysan xataa kala barked dowladdu heli karin, kadib markii laga jartay lacagtii kabka ahayd ee Caalamku bixin jiray.
Wasiirka ayaa dadka Soomaaliyeed ka codsaday, in ay dowladda dhaqaale siiyaan, si looga kabto dhaqaale xumada soo wajahday dowladda, islamarkaana aan gacan shisheeye wax looga sugin.
Sidoo kale, wuxu tilmaamay in uu soo bandhigi doono akoonno lagu caawiyo dowladda, kuwaas oo qof kasta laga rabo in uu ka qayb-qaato Qaaraanka lagu ururinayo.
Previous articleWasiirkii hore ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya oo ku tilmaamay warkii Dubbe wax lala yaabo.
Next articleSacaada Jamaal oo ah gabar muslim ah oo ku nool magaalada Warabe ee Koonfurta Itoobiya oo noqotay gabadha kaalinta koobaad ka gashay imtixaanka dugsiga sare
Waxaa soo baxayay warar sheegaya in dowlada federaalka Soomaaliya bedeshay qaar kamid ah qareenadii ay u qabsatay in ay ka difaacaan dacwada badda Soomaaliya...